Maalinta: Febraayo 14, 2019
Bariiska Weyn ee Bariga Express
Dil toogasho ah oo loo yaqaan 'East Express' East Express wadada gobolka Erzincan ma aha meel kale!
Kirazli-Olimpiyat-Basaksehir Jiidaha Tareenka iyo Gawaarida
Dhismaha khadka khadka adeegga ee u dhexeeya Saldhigga Kirazlı iyo Başakşehir / Saldhigga metrooga wuxuu ka bilaabmay 2006. Saldhigga Warshadaha ee Ikitelli, Xarunta Olombikada ee jihada wareejinta basku u wareego howsha. Dhererka ugu dhow waa 16 km, xitaa 11 ah [More ...]
Dhismaha “Altınordu Intercity Bus Terminal ülen, oo ay dhiseyso Dawladda Hoose ee Magaalada Ordu ee ku taal geeska dariiqa giraanta ee degmada Altınordu, waa mid aan xasilloonayn. Madaxweynaha ayaa sheegaya in dhisme heer sare ah la dhisay. [More ...]
GaadiidkaPark A.Ş., oo ah shirkad laga leeyahay degmada Kocaeli Magaalo-Weyne, ayaa muwaadiniinteeda ugu direysa Maddaarka Sabiha Gökçen hab nabadgelyo leh, raaxo leh oo waqti ku habboon leh oo ah Khadka 250. GaadiidkaPark waxaa iska leh Sabiha Gökçen iyo Kocaeli Intercity Bus Terminal [More ...]
Adeega Iskuxirka ee Köseköy Bridge waa adeeg
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay furaysaa Isgoyska Köseköy, oo gaadiid ku siisa xarunta degmada Kartepe isla markaana ku qaadi doonta gadiidka gawaarida wadada İstanbul-Ankara. Isgoyska ka bixida gabbaldhaca, kaas oo si weyn u fududayn doona isku xirka gaadiidka gobolka, [More ...]
Dhamaadkii Talas-Anayurt Khadka Nidaamka Tareenka ee Kayseri
Kulan faahfaahsan ayaa lala yeeshay Bangiga Horumarinta Islaamka ee ku saabsan maalgelinta Khadka Nidaamka Tareenka Talas-Holand si loo dhiso Dawladda Hoose ee Magaalada Kayseri. Khadka Nidaamka Tareenka Talas-Anayurt ee ay dhisi doonto Dawladda Hoose ee Magaalada Kayseri [More ...]
Dib-u-dhiska Hoolka Wareegyada Birta
10 ee Jamhuuriyadda. Heesta sanadka Açık Waxaan la baxnay dagaal kasta oo dhaca toban sano, / Waxaan abuurnay shan iyo toban milyan oo dhalinyaro ah oo da 'kasta leh toban sano gudahood; / Laga soo bilaabo Taliyaha Guud, kaas oo dunida oo dhan lagu tiriyo; / Ku xidho shabagyo bir ah [More ...]
Iyada oo la raacayo dadaallada Guddoomiyaha Okay Memiş, Erzurum waxaa la siiyaa huteel hudheel oo heerkiisu yahay 5 star hotel. Xarunta Tababarka ee 'AFAD Avalanche Training Center', oo aan inbadan loo adeegsan Xarunta Palandöken Ski Center, ayaa loo rogi doonaa hudheel. Kaas oo lagu qaban doono Golaha Gobollada [More ...]
Muuqaalka Cusub ee Cusub ee İzmir
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir, taas oo ka dhigaysa bedka 71 kun ee 500 mitir murabac mid ka mid ah barxadihii ugu weynaa magaalada oo ay kasbato iyada oo la qaadayo taraafikada gawaarida dhulka hoostiisa ee Mithatpaşa Park, taraamka joojinta iyo dekeda markabka xeebta. [More ...]
Goorma ayaa la furayaa garoonka Rize-Artvin Airport?
Mehmet Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, ayaa sheegay in waqtiga dhicitaanka ee garoonka diyaaradaha Rize-Artvin uu yahay 2022 sida uu dhigayo heshiiska. “Si kastaba ha noqotee, iyadoo la qaadayo tillaabooyinka loo baahan yahay, kordhinta tirada shaqaalaha, qalabka, mashiinnada, gawaarida iyo shaqaalaha, [More ...]
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha M. Cahit Turhan, oo u yimid Rize barnaamijyo kala duwan, ayaa booqday farshaxan yahannada ka dib markii ay ka soo qeybgaleen xafladda aaska Muhittin Baltacı ee degmada Çayeli. Turhan, ka dib Governorayeli Gudoomiyaha Degmada oo booqda Dowlada Hoose [More ...]
Agaasimaha Guud ee TCDD Aydın, Dib u noqoshada Umadda in la eryo
The Republic of Turkey Tareennada State (TCDD) Agaasimaha Guud ee İsa ApaydınWaxaa la sheegay in shaqada looga eryi doono shilalka tareenka ee ka dhacay Çorlu iyo Ankara. Magac kale oo laga saarayo howlgalka, the East Express [More ...]
RayHaber 14.02.2019 Warbixinta Shirka
Qeybta wax soo iibsiga iyo Pinti nabdoonaanta ayaa la iibsan doonaa (TUDEMSAS) Maareynta Deegaanka iyo Adeegga Kormeerka Adeegga Saxeexidda Qalabka Saxeexida